Farmaajo oo ugu dhow Musharaxiinta Madaxtinimada, Soomaaliya(Warbaxin) | Latest News	Sunday, May 19th, 2013	Home
Farmaajo oo ugu dhow Musharaxiinta Madaxtinimada, Soomaaliya(Warbaxin)
Aug 3, 2012 - jawaab	Aqrisatay:972Maxamed Cabdulaahi Farmaajo Ra,iisulwsaarahi hore Xukumadi Tayo, ayaa la saadaliyay in uu yahay ninka kaliya ugu dhow Musharaxinta u taagan bisha Agost in xilka madaxweynaha Soomaaliya qabtan.
Soomaalida ku dhaqan dalka iyo dibadiisa, ayaa tageero buuxdo la garab taagan Ra,iisul wsaarahi hore Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tira koob dhawaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in u yahay ninka ugu dhow bisha agost xilka Madaxweynaha Soomaaliya ee loogu baxaya KMG.
Farmaajo ayaa shacbiyada ku mutestay xiliga uu Ra,iisulwasaraha xukumada loogu magac daray Tayo oo shacabka wax qabeedka noqtay mid aad usoo jiita.
Waxaa lagu balansan yahay bisha aan ku gudo jirno, ee agost in doorasho guud dalka ka dhacdo si loogu baxo KMG, waxaa u taagan Musharaxiinta aad u fara badan kuba oo doonaya in uu mid waliba Madaxweynaha dalka Soomaaliya, majaraha u qabto.
balse saadaasha iyo tira koob lagu sameeyay codada shacabka inta badan waxaa aay u saadaliyeen in Farmaajo yahay ninka ugu horeeya haatan la dhahi kara waa Musharaxa ugu dhow Agost.
Si kas taba ha ahaate waxaa dhawaan dalka Soomaaliya, gudahiisa ka dhaci doono dorasho guud.